अब भारु २ हजार नेपालमा पनि चल्ने ! - E ALL NEPAL
HomeAll PostsUncategorizedअब भारु २ हजार नेपालमा पनि चल्ने !
तर, यसको कारोबार अहिलेसम्म बैध छैन । भारतले आफ्नो फरेन एक्चेन्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट अन्तरगत फेमा नोटिफिकेसन जारी गरेपछि मात्र कारोबार बैध हुन्छ । भारु ५ सय र १ हजारको पुरानो नोट सटहीबारे छलफल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको टोली अहिले भारतमै छ । यो टोलीले भारतीय केन्द्रीय बैंकसँगको छलफलमा पुरानो नोट सटहीका साथै २ हजारको नयाँ नोट नेपालमा चलाउने विषय उठाउनेछ ।
राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, २ हजारको नोट नेपालमा चलाउने विषय लिखित एजेण्डामा त छैन । तर, छलफलमा उठ्छ ।’
पटक हेरियो: 32